Kaduna Kidnapping: Nwaanyị dị ime so na mmadụ ise a tọrọ ụbọchị Easter - Uweojii - BBC News Ìgbò
Kaduna Kidnapping: Nwaanyị dị ime so na mmadụ ise a tọrọ ụbọchị Easter - Uweojii
Nwaanyị dị ime so na mmadụ ise ndị ntọ tọrọ na Kaduna
Ndị uweojii Kaduna steeti kwuru na ndị ntọ tọrọ mmadụ ise gụnyere otu nwaanyị dị ime n'ụlọ ha n'ebe elekere abụọ nke ụzọ ụtụtụ, ụbọchị ụka bụ ụbọchi iri abụọ na otu nke ọnwa Epreelu n'obodo Nariya dị na Kaduna steeti.
Nke a na-eme dịka ndị ntọ gburu mmadụ abụọ - nwaanyị onye mba Briten na otu nwoke one Naịjirịa - ma tọrọ mmadụ atọ ndị ọzọ n'akụkụ Kaduna steeti ọzọ n'ụbọchị Fraịde.
Kidnappers: Ọrụ m bụbu ịdozi akpụkpọụkwụ tụpụ m banye ọrụ ọjọọ a - Onyentọ
'Ihe m gabigara n'aka ndị ntọ'
Ndị bị n'obodo Nariya dị na Kaduna steeti pụtara n'igwe ụbọchị ụka mee ngagharịiwe maka mmadụ ise ahụ a tọrọ n'obodo ha ma gbochie okporoụzọ awara awara Nnamdi Azikwe Expressway ebe elekere asatọ nke ụtụtụ iji gosi iwe ha.
Ha kwuru na ntọ bụzị ihe na-eme kwa ụbọchị na ogbe ha na-emeghị onye na-agbagha ya.
Akụkọ sị n'obodo ahụ na-ekwu na ọ bụ ụmụnwaanyị dị ime abụọ na mmadụ atọ ndị ọzọ bụ ndị ihe ahụ metụtara.
Anyị ejidela ndị gburu Fada Clement n'Enugwu - Ndị uweojii
Otu onye bi nso ebe ihe mere nke achọghị ka a kpọ aha ya kwuru ya hụrụ ndị ntọ ahụ be e ha ji, "Ahụrụ m ka ha ji egbe wakpo ụlọ onye agbataobi m ma tọrọ ụmụnwaanyị abụọ dị ime, otu nwaanyị n'ụlọ ọzọ nakwa otu nwoke."
"Ike ndị ntọ na-aka ike n'ogbe a agwụla anyị."
"Anyị na-egbochi ụzọ ka gọọmentị were hụ ihe anyị na-agabiga. Anyị chọrọ ka gọvanọ gbatara anyị ọsọ enyemaka."
Catholic Church: 'Ndị ntọ wekọrọ ego niile dị na ATM Fada clement, gbuo ya' - Bishop Onaga
Mana ọnụ na-ekwuru ndị uweojii na steeti ahụ bụ DSP Yakubu Sabo gwara BBC Igbo n'ekwentị na; "ụbọchị ụka, o nwere ndị wetara ozi na ndị ntọ bịara n'obodo Nariya ahụ tọrọ nmmadụ ise."
"Ngwa ngwa ozi ahụ batara, DPO mpaghara ebe ahụ kpọrọ ndị otu ya gaa nyocha mpaghara ahụ iji mara ma ha aga-enweta ndị tọ ahụ na ndị ha tọrọ mana ndị ntọ ahụ agbawarala."
Sabo gbara ama na ndị ntorobịa obodo ahụ mere ngagharịwe gbochie okporoụzọ awara awara maka odachie ahụ, ebe ndị uweojii gbosasịrị ha, n'ihi na ha "achọghị ka ndị omekome jiri ya bute mkposa obodo.'
Oge BBC Igbo jụrụ ya ka ọ kọwapụta ndị a tọrọ, Sabo kwuru na "ndị uweojii ka na-eme nyocha ha".
Killiwee Nwachukwu: Onye ike Igbo jiri mee akụkọ ifo
A bụ m onye Naịjirịa kpọmkwem - Atiku
Ihe mere Nwada Igbo bụ Udeh Chiamaka Victoria ji ewu na soshal midia
Vidio, Tupu inye mmadụ ọbara, buru ihe ndị a n'obi
Ihe ga-eme ka Ipob gbaghara gọvanọ Hope Uzodimma - Emma Powerful
Gịnị mere Nnamdi Kanu onye bu igu ewu niile na-eso?
Ndị Ipob asaala Chris Ngige maka ọchịchị Naijirịa
Asari Dokubo ataala ụkwa jaa eze gbasara Nnamdi Kanu
Ebe na mgbe a ga-eli ụkọchukwu TB Joshua
'Ihe ndị gọvanọ ala Igbo na ndị agha Naịjirịa bịara mee n'Engwu bụ ite okwu ude' - CSO
O nweghi ịbọ ọbọ anyị na-eme n'Ohafia kama... Ndịagha Naịjirịa